हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीप्रति श्रद्धाञ्जली ! – ebaglung.com
२०७५ फाल्गुन १६, बिहीबार १९:५५	Top News, थप समाचार
बागलुङ, २०७५ फागुन १६ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएकाहरुप्रति आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ ।
संस्थाको बिहीवार सम्पन्न सञ्चालक समितिको वैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरुप्रति ऋद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको हो । देश चलाउने नेता, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र व्यवसायीहरुको निधनले देशलाई अपुरणीय क्षति भएको भन्दै वैठकले दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सचेत गराएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष हुमाकुमारी जि.सी. (अञ्जु) को अध्यक्षतामा बसेको वैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनाको छानविन गर्न गठित समितिलाई सत्य तथ्य पत्ता लगाई छिटो भन्दाछिटो सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ । साथै यस्ता खाले दुर्घटनाहरुको न्यूनिकरणका लागि सरकारले विशेष पहलकदमी गर्न संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको निरीक्षणपछि पाथीभरा दर्शन गरेर त्यहाँबाट फर्कनेक्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परी मन्त्री अधिकारी सहित उडड्यन प्राविधिकरणका उपमहानिर्देशक बीरेन्द्र श्रेष्ठ, उपसचिव युवराज दाहाल, पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, ध्रुव भौछिभौया, विमान चालक प्रभाकर के.सी. र सुरक्षाकर्मी अर्जुन घिमिरेको निधन भएको छ ।